‘जुनसुकै बजारसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं’ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / ‘जुनसुकै बजारसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं’
‘जुनसुकै बजारसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं’
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता April 20, 2018	0 394 Views
ने पाल सुनचादी व्यवसायी महासंघका के न्द्रीय सदस् य एवं ने पाल सुनचादी व्यवसायी संघका दाङ शाखा अध्यक्ष
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ दाङको अधिवेशन यही बैशाख ८ गते शनिवार घोराहीमा हुँदैछ । अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यक्ष धु्रवकुमार गहतराजसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी-
अधिवे शनको तयारी के छ ?
आजसम्म लगभग ७५ प्रतिशत तयारी पूरा भइसके को छ । अहिले चिठी बा“ड्ने काममा दौ डिरहे का छौ ं । प्रमुख अतिथि के न्द्रीय अध्यक्ष मो हनकुमार सुनार आउनुहुने भएको छ । हो टल माला इनमा कार्यक्रमस् थल तय भएको छ । बैशाख ८ गते शनिवार बिहान नौ बजे अधिवे शनको उद्घाटन हुन्छ । शुक्रवार सा“झसम्म सबै तयारी पूरा गछौर् ं ।
तपाइको कार्यकालमा नमूना काम के गर्नुभयो  ?
मै ले सुनचादीका गहनामा क्वालिटी हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिए“ । हाम्रो कार्यसमितिले कहीं कतै बदमासी हुन दिएन । हामीले तयार पारे का गहनाको क्वालिटीस“ग दे शका जुनसुकै बजारस“ग पनि प्रतिस् पर्धा गर्न सक्ने भएका छौ ं । ने पाल सरकारले ल्याउन लागे को मापदण्डअनुसार अहिल्यै दे खि गहना बनाउने प्रयास थाले का छौ ं । बिना रसायनका गहना तयार गर्नु हाम्रो ठूलो उपलब्धि हो  । बिगतमा बे च्दै आएका रसायनका गहना खो जे र पनि नपाउने अबस्था ल्याएका छौ ं ।
व्यवसायीहरुको अधिकारका लागि अझै गर्न के बाकी छ ?
हामीस“ग निदेर् शिका वा निश्चित ऐ न कानूनको अभाव छ । म के न्द्रीय सदस् य भएको कारणले राज्यस“ग पनि निदेर् शिका मागे का छौ ं । माग्नकै लागि मन्त्रिस् तरीय वार्ता गरे का छौ ं । त्यति गर्दा पनि सरकारले ऐ न निदेर् शिका दिन सके को छै न । यहा जसले जति जस् ता गहना लगाओ स्, जे गरो स् राज्यलाई कुनै मतलव छै न । जनभावना अनुसारका निदेर् शिका राज्यले बनाइदे ओ स् । हामीले त्यहीअनुसारको काम गर्न पाइयो स् । अहिले को नया“ सरकारस“ग अपे क्षा गरे का छौ ं । सुनचादी व्यवसायीको आफ्नै भवन हुनुपनेर् हो  । सबै जसो जिल्लामा बनाएका छन् । हामी सीमित ले वीले घरभाडा लिएर कार्यालय चलाएका छौ ं । हामीले दिने डो ने सनबाहे क अरु आयस्रो त छै न । अब आउने कार्यसमितिले आफ्नै भवन, एम्बुले न्सलगायत आयस्रो तका बाटाहरु खो ज्न जरुरी छ ।
समस्या के छन् सुनचा“दी व्यवसायमा ?
चो रीको समस् या छ । ग्राहकले चो रे र सुन ल्यायो भने व्यवसायीलाई समस् या पर्छ । बाबु आमा, छो राछो री बिरामी छन् भने र बे च्छ । त्यो सुन किने पछि कतै चो रे र ल्याएको भन्ने खुल्यो भने चो रसरह कारवाही हुन्छ । त्यसै ले विगतदे खि नै बिल नभएका सामान खरीद नगनेर् नियम पास गरिसके का छौ ं । त्यसले गर्दा समस् या धे रै हल भएको छ । बिल हराएका सर्वसाधारणहरुलाई अप्ठे रो परे को हुन्छ । त्यस् ताको अवस् था हे रि नागरिकता प्रमाणपत्र, फो न र साक्षी राखे र गहना खरीद गरी समस् या टानेर् प्रयास गरिरहे का छांै  ।
तर जर्तीका नाममा ग्राहक मारमा परे भन्ने गुनासो छ नि ?
जर्ती भने को गहना बनाउ“दा खे र जाने सामान हो  । डिजाइन बनाउ“दा घो ट्ने , काट्ने रे ट्ने गर्दा सुनका कणहरु जान्छन् । त्यसले ग्राहकलाई मर्का पदैर् न । तर त्यसले व्यापारीलाई पनि नाफा ह“ुदै न । मे सिनबाट बुट्टा आउ“दै न त्यसरी निकाल्दा के ही कण झर्छन् । जर्तीले सुन्दरताका लागि मिलाएको मात्रै हो  ।
सरकारलाई राजश्व बुझाउनु हुन्न रे नि ?
त्यसो हो इन । हामीले सरकारलाई आवश्यक राजश्व बुझाएका छौ ं । राज्यलाई तिनेर् कर तिरिरहे का छौ ं । हामीले राजश्व बुझाएका छांै  । अडिट गरे का छौ ं । पसलहरुलाई पनि बिल भर्पाई ठीकसग राख भने र जानकारी गराएका छांै  ।
दाङमा कारो वार कस्तो छ ?
पहिला भन्दा घटे को महसुस गरे का छौ ं । सुनचा“दी भने को मान्छे ले सबै चीज पुगे पछि मात्रै शौ खका लागि प्रयो ग गनेर् साधन हो  । मान्छे लाई नभइ नहुने चिज हो इन । पुगीसरी आएपछि मात्रै यसमा सो चाइ जान्छ । अहिले सुनचा“दीतिर सो च छै न । ठूला घर, महंगा गाडीतिर मान्छे को पै सा डाइभर्ट भएको जस् तो लाग्छ । त्यसले गर्दा कारो बार घटे को हुनसक्छ भन्ने अनुमान गरे का छौ ं । गहना चो री भइराखे का छन् । घा“टीबाट सिक्री तान्छन् । यस् तो अवस् थाले पनि सुनप्रति आकर्षण कम हुन सक्छ । सुनले झकाझुर फुले र हि“ड्दा पनि निर्धक्क हुने वातावरण बन्नुपर्छ । अनि मात्रै यो व्यवसाय फस् टाउ“छ भन्ने लाग्छ ।
अबै ध तरीकाले सुन ल्याएर राजश्व ठगी गनेर् काममा व्यापारी पनि लागे का छन् भन्छन, नि ?
यहाको कारो वार टो ले कारो वार हो  । बुटवल, ने पालगञ्जलगायत बाहिरका शहरबाट ग्राहक आउ“दै नन् । त्यसै ले चो री वा अबै ध तरीकाले सुन ल्याउनुपदैर् न । सीमित मान्छे को सीमित कारो वार हुने क्षे त्र हो  । पुरानो चिज मात्रै ल्याउने थिच्ने बनाउने धे रै हुन्छ । त्यसै ले दुई नम्बर कारो वार कसै ले गर्छ भन्ने लाग्दै न ।
अन्तमा, मै ले सो ध्न छुटाएका र यहाले भन्नै पनेर् विषय के ही छन् कि ?
सुन पसलमा चो रको बिगविगी छ । एक दुई ठाउमा चो नेर् प्रयास भएको छ । एक दुई ठाउमा चो री भयो  । यसमा सबै पक्षबाट सहयो गको आशा गरे का छौ ं । अन्तमा, सबै लाई अधिवे शनमा आउन आह्वान गर्छु । अधिवे शनको संघारमा आफ्ना विचारहरु व्यक्त गनेर् अवसर दिनुभयो , यसका लागि नया“ युगबो ध राष्टिय दै निक परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
प्रस्तुतिः गोविन्द खड्का
Previous: जनस्वास्थ्यमा खेलवाड,लमही अस्पतालमा रे बिजबिरुद्धको खोपसम्म छै न
Next: तीनजना पकेटमार पक्राउ